भारत र वेस्ट इन्डिज भिड्दै, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाउलान् मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
भारत र वेस्ट इन्डिज भिड्दै, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाउलान् मौका?
काठमाडौंः भारत र वेस्ट इन्डिजबीचको एकदिवसीय सिरिजको दोस्रो खेल आज हुँदैछ । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ७ः१५ बजेदेखि सुरु हुँदैछ ।
याे पनि पढ्नुस टि–२० सिरिजः भारतद्वारा वेस्ट इन्डिजलाई १६८ रनको लक्ष्य